Hoggaamiyaha macaaradka Kenya Odinga oo sheegay in uunan oggollaan doonin awood qaybsi - Horn Future
Hoggaamiyaha macaaradka Kenya Odinga oo sheegay in uunan oggollaan doonin awood qaybsi
Nairob (Horn Future)-Hoggaamiyaha macaaradka Kenya Raila Odinga ayaa sheegay in isbahaysigiisa uunan oggollaan doonin wax awood qeybsi ah oo uu la galo xisbiga hogaamiyahan ay hirdamayaan ee Uhuru Kenyatta sida ay sheegtay warbaahinta caalamku.
Tallaabada hogaamiyahan ayaa waxay timid laba maalmood kadib markii Maxkamadda Sare ay go’aamisay in ay waxba kama jiraan ka dhigtay doorashadii madaxweynanimo iyo in dib loogu celiyo cod bixinta 60 maalmood gudahood.
Odinga oo ka hadlay isaga oo ku sugan dibada kaniisad kutaala magaaladda Nairobi ayaa waxa uu yidhi”Ma qaybsanayno awooda”,.
Waxa sido kale isaga oo hadalkiisa sii wata uu ku daray odhaah caanka ah gudaha dalkaas oo ah “Ma kala qaybin doono xabbada loxooxda/kimista ah,”.
Waxa uu ku cel celiyay wixii uu hore codsaday kadib xukunka,kaas oo la soo saaray Jimcihii oo ahaa in isbadil lagu sameeyo guddiga doorashada iyadoo shardi uu uga dhigay ka qaybgalka macaaradka ee doorashada dib loogu celin doono,waxana isla maalintaas uu ka codsaday Guddigan inuu xilka ka deggo iyo in loo gudbiyo maxkamad.
Dhanka kale, garsoorka Kenya ayaa muujiyay sida uu uga xun yahay “hanjabaadaha qarsoon” ee kasoo yeedhay madaxweyne Uhuru Kenyatta ee uu u jeediyay garsoorayaasha Maxkamadda Sare ee uu kaga jawaabayay go’aankii taariikhiga ah ee Maxkamaddani ay ku joojisay iyo in dib loogu celiyo doorashada sababo la xidhiidha inay sharci-darro ku dhacday.
Dhinaca kale agaasimaha guud ee ururka garsoorayaasha iyo sharci-dajiyayaasha Kenya ayaa ka hor sheegay Maxkamadda Sare ee badhtamaha magaalada Nairobi in ururku “aad uga soo horjeedo hadaladda Kenyatta ee keenay dhalan-rogga sumacda garsoorayaasha Maxkamadda Sare.
« Aljazeera Carabi oo ka diyaarisay warbixin argagax leh xasuuqa Muslmiinta Rohingya daawo	» Weerar Islaam nacayb ah oo lala beegsaday Masjid ku yaala Koonfur-galbeed ee dalka Holland